Twitter: Autofollow dabere na Ọnọdụ | Martech Zone
Twitter: Autofollow dabere na Ọnọdụ
Sunday, December 29, 2013 Sunday, December 29, 2013 Douglas Karr
N'ịbụ ndị ọha na eze na ndị na-ekwurịta okwu, azụmaahịa nwere ike iji ya Twitter na-eto eto ha obodo retail okporo ụzọ - mfe karịa ọtụtụ na-eche. Ndị ọrụ Twitter na-arụsi ọrụ ike ma na-ekwusi ike banyere ebe ha nọ na ihe ha na-eme. Site na isoro ndị ọrụ Twitter na-arụ ọrụ na mpaghara, ụlọ ọrụ ndị dabere na azụmaahịa mpaghara nwere ike ịbawanye okporo ụzọ ha yana ịbawanye akara ha n'ịntanetị.
Ndị na-ere ahịa, ụlọ ahịa dị na mpaghara, ụlọ mmanya, klọb, ndị ọrụ mkpuchi… ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla nke na-eme ka azụmahịa dabere na ọnọdụ obodo nwere ike irite uru site na isoro na ịzụlite mmekọrịta na ndị ọrụ Twitter gburugburu azụmahịa ha. Ihe mgbakwunye bara uru bụ na ndị folks a na - ekekọrịta foto, vidiyo na mmelite - ọ bụghị naanị na Twitter, kama na netwọkụ mmekọrịta ha na ngwa ha.
Tweet Adder ga-ahụ ndị ọrụ twitter site na ọnọdụ n'ime 10 kilomita, 25 kilomita, 50 kilomita, ma ọ bụ 100 kilomita nke koodu zip ọ bụla, mbubata, iziga akpaaka na-eso. Tweet Adder achọpụtala nke ahụ 56% ga-eso gị azụ - na-enye ha ohere ibido ịkparịta ụka n’ịntanet. Nakwa, ha nwere ike ịmalite ịzaghachi na ọbụna weghachite mmelite gị!
Ngosipụta: Nke ahụ bụ njikọ njikọta!
Tags: autofollowanyageolocationradiusngwa tweettweetedderTwittern'ime ebe di anya
Ọrụ Digital Media na Marketing
Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo ahia